Shiinaha oo si weyn uga carooday arin uu ku kacay Mareykanku
May 21, 2020 Mahad Jama 2
NAIROBI(P-TIMES)- Dowladda Mareykanka ayaa Congress-ka ku wargelisay suurta-galnimada inay Taiwan ka iibineyso gantaallada biyaha hoostooda ku safra oo ku kacaya 180 Milyan oo Dollar, taasi oo sii xumaynaysa xiriirka Washington iyo Beijing.
Dowladda Mareykanka si la mid ah inta badan dalalka caalamka wax xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah lama lahan Taiwan, hase yeeshee waxaa jira sharci ku qasbaya inay ka iibayso hub ay isku difaacdo.
Waaxda Arrimaha Dibedda Mareykanka ayaa ansixisay iibka gantaallada 18 MK-48 Mod6 ee maraakiibta badda laga rido oo casri ah, kuwaas oo ku kacaya 180 milyan oo dollar sida ay sheegtay Hay’adda Iskaashiga Difaaca Amniga Mareykanka oo bayaan soo saartay.
Hay’adda ayaa sheegtay in iibkan uu u adeegayo danta qaran, amni iyo dhaqaale ee Mareykanka isla markaana ay ku wargelisay Congress-ka.
Zhao ayaa intaas ku daray in Shiinaha ay ku booriyeen dowladda Mareykanka inay joojiso dhamaan hubka ay ka iibiso iyo xiriirka militari ee ay la leedahay Taiwan si looga hortago dhaawac kale oo gaara xiriira labada dal.
Taiwan ayaa sheegatay inay tahay dal madax banaan, halka Shiinaha ay u arkaan gobol ka tirsan.